စိတ်ဖိစီးမှု ဖြေလျော့ဖို့ နည်းလမ်း ၁၁ သွယ် – Gentleman Magazine
စိတျဖိစီးမှု ဖွလြေော့ဖို့ နညျးလမျး ၁၁ သှယျ
စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာ ကောင်းတဲ့ ခံစားမှုတစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်းတို့လို လက္ခဏာတွေ ခံစားရနိုင်တဲ့အပြင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလဲ အထီးကျန်ခြင်း၊ အလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်း၊ စိတ်ကျခြင်းတို့လို ဝေဒနာတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ကတော့ စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာ အမြဲလိုလို ရှိနေမှာပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုက သင့်ရဲ့ ဘဝကို စားသုံးမသွားရလေအောင် ကျွန်တော် ပေးချင်တဲ့ အကြံဉာဏ် ၁၁ ခု ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့
၁. ဘာက စိတ်ဖိစီးစေလဲ ဆိုတာ လေ့လာပါ
သင့်ကို ဘာတွေက စိတ်ဖိစီးစေလဲဆိုတာ လေ့လာပါ။ သင် ဘယ်လို အချိန်မှာ စိတ်ဖိစီးလဲ၊ စိတ်ဖိစီးရင် ဘာလုပ်မိလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းနှစ်ခုကို ဖြေကြည့်ရင် ဘာကြောင့်စိတ်ဖိစီးလဲဆိုတာ ပေါ်လာမှာပါ။ ဘာကြောင့် စိတ်ဖိစီးလဲ သိရရင် စာရင်းလုပ်ထားပြီး ထိပ်ဆုံးကဟာတွေကို ဖျောက်လို့ရရင်ဖျောက်နိုင်ဖို့၊ မရရင် စိတ်လျှော့ထားနိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါ။
၂. ကျန်းမာအောင် နေထိုင်ပါ
လမ်းလျှောက်တာ၊ ယောဂကျင့်တာ၊ အဆီများတဲ့ အစားတွေ မစားတာ၊ ညဘက် ကောင်းကောင်းအိပ်တာ တို့လိုမျိုး သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို သင် ဂရုစိုက်ခြင်းဟာ စိတ်ဖိစီးမှု လျော့နည်းစေဖို့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်း တစ်ခုပါပဲ။
၃. စနစ်တကျ နေပါ
သင့်ရဲ့ ရုံးမှာဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် စနစ်တကျနေပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တစ်ခုခုကို အရေးတကြီးလိုက်ရှာနေရပြီး မတွေ့ရင် ဘယ်လောက် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိကြမှာပါ။
၄. အချိန် မဆွဲပါနဲ့
အချိန်ဆွဲသူတွေဟာ စိတ်ဖိစီးမှု ပိုများလေ့ ရှိပြီး ပိုပြီးနိမ့်ကျတဲ့ ဘဝမှာ နေတတ်ကြရပါတယ်။ အဲဒါကို ဖြေဖျောက်နိုင်ဖို့ လုပ်စရာရှိ ချက်ခြင်းလုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ကို မွေးထားပါ။
ဖုန်းရှိနေရင် ဝင်လာသမျှ Message တိုင်း Noti တိုင်းကို အလုပ်မအားတဲ့ကြားက ဖွင့်ဖတ်၊ စာပြန်နေရပြီး စိတ်ဖိစီးမှုကို တိုးစေပါတယ်။ အလုပ်ချိန်၊ အနားယူချိန်တွေမှာ ဖုန်းပိတ်ထားပါ။ ဒါမှမဟုတ် Data ပိတ်ထားပါ။
၆. ပျော်စရာကောင်းတာ လုပ်ပါ
စိတ်ဖိစီးမှုလျော့ကျစေဖို့ သင် ဝါသနာပါတဲ့အရာတွေ လုပ်ဖို့ အချိန်ပေးထားပါ။ ဘယ်လောက် အလုပ်ရှုပ်ရှုပ် ပျော်ဖို့ အချိန်ထားပါ။ စိတ်ဖိစီးလျက်နဲ့ အလုပ်ဆက်တိုက်လုပ်တာထက် ပျော်ပျော်နေပြီးမှ အလုပ်လုပ်တာ ပြီးမြောက်နှုန်း ကွာပါတယ်။
၇. အားလပ်ချိန် ထားပါ
သင့်ရဲ့ အားလပ်ချိန်ကို တခြား အလုပ်ကိစ္စတွေ ဖြည့်မသွားပါစေနဲ့။ အပေါ်က နံပါတ် ၆ က ကိစ္စတွေကို လုပ်ဖို့ ထားပါ။
၈. လူတွေကို အရှိကို အရှိအတိုင်း ဆက်ဆံပါ
သင့်ဘေးမှာ တစ်နေ့လုံး ပွစိပွစိ အိမ်အကြောင်းပြောနေတတ်တဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အတွက် စိတ်ညစ်နေရပါသလား။ သင်နဲ့အမြဲ ဆက်ဆံနေရမယ့်လူတွေကို စိတ်ညစ်နေလို့ မထူးပါဘူး။ သူတို့နဲ့ ရင်ဆိုင်ဖို့ နည်းလမ်း ရှာထားပါ။
ကျေးဇူးသိတတ်သူတွေဟာ ပိုပြီး ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး စိတ်ဖိစီးမှု နည်းတတ်ပါတယ်။ ညဘက် အိပ်ခါနီးမှာ ဒီနေ့ သင် ကြုံခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတင်စရာ ဆယ်ခုကို စဉ်းစားပြီးမှ အိပ်ပါ။
၁၀. အလုပ်နှစ်ခု ပြိုင်တူ မလုပ်ပါနဲ့
အရမ်းအလုပ်ရှုပ်နေလို့ နှစ်ခုပြိုင်တူလုပ်ရင် အဆင်ပြေသွားမယ် ထင်ပါသလား။ မှားပါတယ်။ အဲဒါဟာ စိတ်ဖိစီးမှု ပိုများစေပြီး သင့် အလုပ်စွမ်းအားကို လျော့ကျစေပါတယ်။
ခဏခဏ ကြုံရင်ကြုံသလို Kiss ပေးနေကြတဲ့ စုံတွဲတွေဟာ တစ်ညတစ်ခါလောက်ပဲ နမ်းတဲ့ စုံတွဲတွေထက် စိတ်ဖိစီးမှု ၈ ဆ လျော့နည်းကြပါတယ်။ နမ်းခြင်းဟာ တစ်ယောက်နဲ့ စတ်ယောက် ဆက်သွယ်မှု ပိုရှိစေပြီး စိတ်ဖိစီးမှု လျော့ကျတဲ့ ဟော်မုန်းတွေ ထုတ်ပေးလို့ပါ။
အဲဒိတော့ခုပဲ သင့်ကောင်မလေးကိုနမ်း၊ သင်ဖတ်ချင်တဲ့ စာတစ်အုပ်ကိုကိုင်၊ သင် ကျေးဇူးတင်စရာတွေကို ကျေးဇူးတင်၊ ပြီးတော့ ကိုယ့်ဘာသာ အလုပ်တွေနဲ့ အပိမခံပါနဲ့တော့။
စိတျဖိစီးမှုဆိုတာ ကောငျးတဲ့ ခံစားမှုတဈခု မဟုတျပါဘူး။ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာမှာ ခေါငျးကိုကျခွငျး၊ ဗိုကျအောငျ့ခွငျးတို့လို လက်ခဏာတှေ ခံစားရနိုငျတဲ့အပွငျ စိတျပိုငျးဆိုငျရာမှာလဲ အထီးကနျြခွငျး၊ အလုပျမလုပျနိုငျခွငျး၊ စိတျကခြွငျးတို့လို ဝဒေနာတှေ ခံစားရနိုငျပါတယျ။
လုပျငနျးရှငျတှအေတှကျကတော့ စိတျဖိစီးမှုဆိုတာ အမွဲလိုလို ရှိနမှောပါ။ စိတျဖိစီးမှုက သငျ့ရဲ့ ဘဝကို စားသုံးမသှားရလအေောငျ ကြှနျတျော ပေးခငျြတဲ့ အကွံဉာဏျ ၁၁ ခု ရှိပါတယျ။ အဲဒါတှကေတော့
၁. ဘာက စိတျဖိစီးစလေဲ ဆိုတာ လလေ့ာပါ
သငျ့ကို ဘာတှကေ စိတျဖိစီးစလေဲဆိုတာ လလေ့ာပါ။ သငျ ဘယျလို အခြိနျမှာ စိတျဖိစီးလဲ၊ စိတျဖိစီးရငျ ဘာလုပျမိလဲ ဆိုတဲ့ မေးခှနျးနှဈခုကို ဖွကွေညျ့ရငျ ဘာကွောငျ့စိတျဖိစီးလဲဆိုတာ ပျေါလာမှာပါ။ ဘာကွောငျ့ စိတျဖိစီးလဲ သိရရငျ စာရငျးလုပျထားပွီး ထိပျဆုံးကဟာတှကေို ဖြောကျလို့ရရငျဖြောကျနိုငျဖို့၊ မရရငျ စိတျလြှော့ထားနိုငျဖို့ ကွိုးစားကွညျ့ပါ။
၂. ကနျြးမာအောငျ နထေိုငျပါ
လမျးလြှောကျတာ၊ ယောဂကငျြ့တာ၊ အဆီမြားတဲ့ အစားတှေ မစားတာ၊ ညဘကျ ကောငျးကောငျးအိပျတာ တို့လိုမြိုး သငျ့ခန်ဓာကိုယျကို သငျ ဂရုစိုကျခွငျးဟာ စိတျဖိစီးမှု လြော့နညျးစဖေို့ အကောငျးဆုံး နညျးလမျး တဈခုပါပဲ။
၃. စနဈတကြ နပေါ
သငျ့ရဲ့ ရုံးမှာဖွဈဖွဈ၊ အိမျမှာပဲ ဖွဈဖွဈ စနဈတကနြပေါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တဈခုခုကို အရေးတကွီးလိုကျရှာနရေပွီး မတှရေ့ငျ ဘယျလောကျ စိတျအနှောငျ့အယှကျ ဖွဈတယျဆိုတာ သိကွမှာပါ။
၄. အခြိနျ မဆှဲပါနဲ့
အခြိနျဆှဲသူတှဟော စိတျဖိစီးမှု ပိုမြားလေ့ ရှိပွီး ပိုပွီးနိမျ့ကတြဲ့ ဘဝမှာ နတေတျကွရပါတယျ။ အဲဒါကို ဖွဖြေောကျနိုငျဖို့ လုပျစရာရှိ ခကျြခွငျးလုပျတတျတဲ့ အကငျြ့ကို မှေးထားပါ။
ဖုနျးရှိနရေငျ ဝငျလာသမြှ Message တိုငျး Noti တိုငျးကို အလုပျမအားတဲ့ကွားက ဖှငျ့ဖတျ၊ စာပွနျနရေပွီး စိတျဖိစီးမှုကို တိုးစပေါတယျ။ အလုပျခြိနျ၊ အနားယူခြိနျတှမှော ဖုနျးပိတျထားပါ။ ဒါမှမဟုတျ Data ပိတျထားပါ။
၆. ပြျောစရာကောငျးတာ လုပျပါ
စိတျဖိစီးမှုလြော့ကစြဖေို့ သငျ ဝါသနာပါတဲ့အရာတှေ လုပျဖို့ အခြိနျပေးထားပါ။ ဘယျလောကျ အလုပျရှုပျရှုပျ ပြျောဖို့ အခြိနျထားပါ။ စိတျဖိစီးလကျြနဲ့ အလုပျဆကျတိုကျလုပျတာထကျ ပြျောပြျောနပွေီးမှ အလုပျလုပျတာ ပွီးမွောကျနှုနျး ကှာပါတယျ။
၇. အားလပျခြိနျ ထားပါ
သငျ့ရဲ့ အားလပျခြိနျကို တခွား အလုပျကိစ်စတှေ ဖွညျ့မသှားပါစနေဲ့။ အပျေါက နံပါတျ ၆ က ကိစ်စတှကေို လုပျဖို့ ထားပါ။
၈. လူတှကေို အရှိကို အရှိအတိုငျး ဆကျဆံပါ
သငျ့ဘေးမှာ တဈနလေုံ့း ပှစိပှစိ အိမျအကွောငျးပွောနတေတျတဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျအတှကျ စိတျညဈနရေပါသလား။ သငျနဲ့အမွဲ ဆကျဆံနရေမယျ့လူတှကေို စိတျညဈနလေို့ မထူးပါဘူး။ သူတို့နဲ့ ရငျဆိုငျဖို့ နညျးလမျး ရှာထားပါ။
ကြေးဇူးသိတတျသူတှဟော ပိုပွီး ပြျောပြျောနတေတျပွီး စိတျဖိစီးမှု နညျးတတျပါတယျ။ ညဘကျ အိပျခါနီးမှာ ဒီနေ့ သငျ ကွုံခဲ့တဲ့ကြေးဇူးတငျစရာ ဆယျခုကို စဉျးစားပွီးမှ အိပျပါ။
၁၀. အလုပျနှဈခု ပွိုငျတူ မလုပျပါနဲ့
အရမျးအလုပျရှုပျနလေို့ နှဈခုပွိုငျတူလုပျရငျ အဆငျပွသှေားမယျ ထငျပါသလား။ မှားပါတယျ။ အဲဒါဟာ စိတျဖိစီးမှု ပိုမြားစပွေီး သငျ့ အလုပျစှမျးအားကို လြော့ကစြပေါတယျ။
ခဏခဏ ကွုံရငျကွုံသလို Kiss ပေးနကွေတဲ့ စုံတှဲတှဟော တဈညတဈခါလောကျပဲ နမျးတဲ့ စုံတှဲတှထေကျ စိတျဖိစီးမှု ၈ ဆ လြော့နညျးကွပါတယျ။ နမျးခွငျးဟာ တဈယောကျနဲ့ စတျယောကျ ဆကျသှယျမှု ပိုရှိစပွေီး စိတျဖိစီးမှု လြော့ကတြဲ့ ဟျောမုနျးတှေ ထုတျပေးလို့ပါ။
အဲဒိတော့ခုပဲ သငျ့ကောငျမလေးကိုနမျး၊ သငျဖတျခငျြတဲ့ စာတဈအုပျကိုကိုငျ၊ သငျ ကြေးဇူးတငျစရာတှကေို ကြေးဇူးတငျ၊ ပွီးတော့ ကိုယျ့ဘာသာ အလုပျတှနေဲ့ အပိမခံပါနဲ့တော့။
Previous: နှလုံးသားရေးမှာ အမြဲ ကံခေနေပါသလား
Next: မိန်းကလေးတွေက လျို့ဝှက်ထားတတ်သည့် အချက် ၃၀